होटल बाली बीच र गाउँ3* (ग्रीस, क्रेते।): फोटो र समीक्षा
ग्रीस - प्राचीन इतिहास संग एक देश, समय मा यसलाई यहाँ जन्म र ठूलो सभ्यताहरू विकसित थिए कि किनभने। आज, यसको लागि पर्यटकहरूले थोरै जलवायु र पौराणिक ग्रीक आतिथ्य आनन्द लिई रहनुभएको बेलामा रमाइलो गर्न चाहने समुद्र तट मा समय खर्च गर्न स्वर्ग छ।
शायद हरेक यात्री क्रेते ग्रीस को सबै भन्दा प्रसिद्ध र लोकप्रिय द्वीप को छ भनेर थाह छ। यो ठाउँ धेरै यात्री छ र एक अस्थायी आश्रय रूपमा चयन गरिएको छ। हरेक स्वाद र बजेट लागि केहि - को पाठ्यक्रम, होटल धेरै छन्। तर जब अनुभवी पर्यटकहरु छनौट, होटल बाली बीच गाउँ हेर्न। त्यो किन रिसोर्ट छ र यति लोकप्रिय भएका थिए?
यो स्थान राख्न सुविधाजनक छ?
पहिलो, गरेको स्थान सामना गरौं होटल बाली को गाँउ3छ त बीच *। Rethymno, अर्थात् को बाली को आरामदायक माछा मार्ने गाउँमा - यो समुद्र तट मा लगभग यहाँ थियो, र तपाईं एउटा अविस्मरणीय छुट्टी खर्च गर्न सक्षम हुनेछ। होटल एक Hillside मा निर्माण गरिएको छ, र वस्तुतः कहीं तपाईं पहाड घेरिएको खाडी को दृश्य, आनन्द उठाउन सक्छौं।
त्यसैले यहाँ ज्यादातर शान्त बाँकी को प्रशंसक द्वारा भ्रमण, त्यहाँ कुनै हल्ला दल र नाइटक्लब छन् - यो शान्तिमय रिसोर्ट शहर छ। तैपनि, शहर त्यहाँ पसलहरूमा, सुपरमार्केट र क्याफेहरू हो, छोटो मा, पूर्वाधार राम्रो विकास भएको छ। 15 मिनेट बस रोक्न हिंड्न र त्यहाँबाट - गर्न द्वीप को लगभग कुनै पनि बिन्दु।
केन्द्र यात्राहरु रेथिनन देखि दूरी 27 किमी छ। द्वीप गरेको राजधानी Heraklion बारेमा 45 किमी छ। यो पनि विमानस्थल घरहरुमा - 40 मिनेट - होटल 30 भित्र पुग्न सकिन्छ। होटल र यात्रा कम्पनीहरु ग्राहकहरु स्थानान्तरण प्रस्ताव, त्यसैले कदम बारे चिन्ता छैन।
होटल बाली बीच गाउँ3* (ग्रीस, क्रेते): इलाका को सुविधाहरू
होटल दुई उच्च वृद्धि आवासीय भवन हुन्छन्। आवास बीच समुद्र तट मा व्यावहारिक स्थित छ। उहाँले, प्रसंगवश, 1980 मा बनाइएको थियो। तर जटिल को दोस्रो भाग, अर्थात् बाली गाउँ हिल को शीर्ष मा स्थित - शीर्ष सहज पत्थर सिढी छ, तर त्यहाँ बाट दृश्य अचम्मको भेटी। खैर, यो भवन 1996 मा निर्माण गरिएको थियो। 2007 मा एक पूर्ण नवीकरण मात्र होइन मरम्मत तर पनि सम्पूर्ण उपकरण को प्रतिस्थापन समावेश जो, यहाँ गरियो।
सबै सहज walkways, terraces र स्विमिंग पूल, र सबै आलिशान greenery र उज्ज्वल भू-मध्य रंग संग सजाया - होटल क्षेत्र धेरै सुन्दर छ।
कोठा को नजर? फोटो र विवरण
होटल बाली बीच गाउँ 125 अतिथि कोठा को सम्पत्तिको छ। 33 वर्ग मीटर - 28 को एक क्षेत्र यो विशाल कोठा। यो एक निजी बालकनी वा ढाकिएको छत, जहाँ तपाईं स्थानीय दृश्यहरु पराउँछु सक्नुहुन्छ हुनेछ प्रदान गर्दछ।
अतिथिहरूको आरामदायक रहन को लागि सबै संग प्रदान गरिन्छ। कोठा ठूलो डबल वा एकल बेड छ, एक सोफा, इच्छित यदि विस्तार गर्न सकिन्छ जो (अतिरिक्त बिस्तर)। समीक्षा पनि आधुनिक घरेलू उपकरण उपस्थिति याद गर्नुहोस्। त्यहाँ व्यक्तिगत हावा-कंडीशनिंग (को चिसो महिनामा, त्यहाँ केन्द्रीय ताप छ), टिभी, टेलिफोन र सुरक्षित सुरक्षा लक छन्। अतिथिहरूको सहज मा-कोठा मिनी-फ्रिज लाग्छ।
बाथरूम सानो तर खुसी शुद्धता र आधुनिक शवर। एक डुब्नु, शौचालय, पर्खाल दर्पण पनि छ। पानी आपूर्ति संग, खैर, कुनै समस्या - यो घडी छ। तपाईं सफा तौलिया, साथै दैनिक सफाई र गुणवत्ता मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
यो होटल मा खान सम्भव छ?
बाली बीच गाउँ3* होटल अतिथि मा एक आहार आशा गर्न सक्छौं? ग्रीस यसको भोजन लागि प्रसिद्ध छ किनभने, र यो बिदाको समयमा पर्यटकहरु यसको सबै आकर्षण रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ कि प्राकृतिक छ।
होटल जटिल "सबै समावेशी" एक सम्झौता यात्रा सिस्टम मा काम गर्छ। भोजन होटल रेस्टुरेन्ट मा आयोजित गर्दै छन् (यो दुवै भवन लागि साधारण छ)। यहाँ तपाईं शान्त, ध्यान दिएर एक प्रतिभाशाली महाराज देखि Waiters र पाठ्यक्रम, स्वादिष्ट खाना पाउनुहुनेछ। प्रतिक्रियाको यात्री को वैविध्यपूर्ण मेनु र खाना स्वादिष्ट छ भनेर पुष्टि। तपाईं नाश्ता, मासु व्यञ्जन, माछा र समुद्री भोजन, सह भोजन, सलाद र ताजा फल प्रदान गर्नेछ। बाटो, हरेक दिन, अतिथि लाड प्यार स्वादिष्ट घर आइसक्रिम र पेस्ट्री छन्।
तपाईं पनि लबी वा पूल द्वारा पट्टी भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। सबै समावेशी लागि भुक्तानी गर्ने पर्यटकहरूको मुक्त भोजन र स्थानीय पेय (भन्नु, यो एक धेरै स्वादिष्ट रक्सी गर्दछ) प्राप्त गर्न सक्छ। समुद्र तट मा पनि एक पल्ट छ, तर यहाँ तपाईं बिल भुक्तानी गर्न आवश्यक छ।
समुद्र तट मा आराम: दूरी, मजा र सुविधा
पहिले नै उल्लेख रूपमा, होटल जटिल बाली बीच गाउँ समुद्र तट मा स्थित छ - यो केवल सिंढीबाट जान आवश्यक छ। यहाँ समुद्र तट निजी हो, त्यसैले मात्र शिखर कब्जा को अवधि समयमा मानिसहरू धेरै। खाडी हावा बाट सुरक्षित छ, त्यसैले पानी सधैं, शान्त सफा र न्यानो छ। किनारमा बिस्तारै समुद्र बढ्छ गर्न प्रवेश मा जबकि गहिराई ढाकिएको एक नरम, सफा बालुवा।
सूर्य बेड को प्रयोग को लागि, भुक्तानी गर्न गद्दे र छाते, तर यो यस्तो खुशी छैन धेरै छ। मनोरञ्जन लागि, यहाँ पर्यटकहरु, छोटो मा, रमाइलो र समय खर्च गर्न पौडिरहेका छन्, स्नोर्कलिङ, बोटिङ र डुङ्गा।
होटल बाली बीच गाउँ3* (क्रेते): थप सेवाहरू
तपाईंले केही अतिरिक्त सुविधा होटल मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि राती अगाडि डेस्क कसैले एक कर्मचारी सदस्य हो भनेर टिप्पण लायक छ, त्यसैले कर्मचारी संग कुराकानी गर्न कुनै पनि समयमा तपाईं जानकारी प्राप्त वा समस्या रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। खैर, खुसी कर्मचारीहरु आफ्नो टिकट बुक, सहयोग गर्न स्थानान्तरण, ट्याक्सी व्यवस्था।
प्रशस्त निःशुल्क पार्किङ नजिकै छ। खैर, शहर को भद्र आकार बावजुद, त्यहाँ जहाँ तपाईं एक कार, बाइक वा इन्जिन ले साइकिल भाडामा सक्नुहुन्छ धेरै ठाउँ हुन् (आफ्नो आफ्नै परिवहन भएको द्वीप अन्वेषण गर्न अवसर प्रदान गर्दछ)।
होटल मा वायरलेस इन्टरनेट जडान को संभावना, तर त्यहाँ एक कम्प्युटर कुना, तपाईं वर्ल्ड वाइड वेब जान सक्षम हुनेछ जहाँ छन् एक ल्यापटप वा केही अन्य कार्यालय उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
होटल क्षेत्र मा अवकाश के हो?
सबैभन्दा भाग आराम गर्न चाहने पर्यटकहरुका लागि डिजाइन होटल जटिल बाली बीच गाउँ समुद्र तट मा छ। यसलाई जोडे, जवान कम्पनीहरु र spouses भरिएको छ, तर आफ्नो अधिकांश समय तिनीहरूले होटल बाहिर खर्च।
अर्कोतर्फ, तपाईं होटल मा आफ्नो अवकाश समय रोशन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै स्विमिंग पूल छन्। एक ढलान मा निर्मित, तिनीहरूलाई केही खैर, - ताजा पानी मा स्विमिंग, तपाईं एक साथ समुद्र दृश्य आनन्द उठाउन सक्छौं। स्नान छोराछोरीको लागि अलग स्थान पनि छ। प्रबन्ध बेड को छतों मा, र नजिकका त्यहाँ नाश्ता गर्दछ जो एक पल्ट छ। तिमी मजा बिलियर्ड्स वा टेबल टेनिस को एक खेल खेल्न सक्छ।
र, को पाठ्यक्रम, पर्यटन छुट्टी को संभावनाहरु बारे मा भूल छैन किनभने क्रेते - मिथक र प्राचीन सभ्यताहरू रहस्य मा shrouded एक द्वीप। त्यहाँ हेर्न कुरा हो। र छिमेकी मार्फत एक रोचक निर्देशित भ्रमण, तपाईं होटल र शहरमा टिप्न गर्न सक्नुहुन्छ।
पर्यटकहरु के? छाप र समीक्षा
जानकारी को आधिकारिक स्रोतबाट निश्चित पढेर लायक बुकिंग अघि। तर अनुभवी यात्री एक राम्रो विचार पूर्व अतिथि बाँकी जो मूल्यांकन, हेर्न पनि छ भनेर थाहा - तिनीहरूले अक्सर धेरै बढी सान्दर्भिक र सत्यवादी जानकारी। के पर्यटकहरु होटल बाली बीच गाउँ? बिल्कुल! होटल ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा बाँकी।
यसको सुविधाजनक स्थान - मात्र होइन समुद्र तट गर्न पैदल दूरी, तर यसको पसलहरूमा, taverns र रेस्टुरेन्ट संग शहर केन्द्र। कोठा समुद्र को तेजस्वी दृश्य, पहाड र रंगीन भू-मध्य बगैचा प्रस्ताव। कोठा, खैर, सुविधाजनक पनि छ - फर्नीचर र उपकरण नयाँ हो, सबै कुरा ठीक काम गर्दछ। पाहुनाहरूको मा नौकरानियां कुनै उजुरी छ रूपमा काम गर्न। खैर, यहाँ कर्मचारी साँच्चै धेरै, सत्कार गर्न मद्दत गर्न, र तिनीहरूलाई कुराकानी गर्न सजिलो र रमाइलो (धेरै एकदम reasonably आफूलाई रूसी मा व्यक्त) छ सधैं तयार छन्।
यसको आफ्नै निजी समुद्र तट को उपलब्धता, को पाठ्यक्रम, को लाभ बुझाउँछ, र होटल क्षेत्रमा आराम गर्न। यात्री बाली बीच गाउँ होटल सल्लाह छन्। ग्रीस - राम्रो सेवा र कम मूल्यहरु प्रसन्न तुल्याउने देश।
Aquamarine4* (सनी बीच, बुल्गेरिया): वर्णन, आराम र समीक्षा
डायना2* (स्वर्ण बालुवा, बुल्गेरिया): होटल, सेवा, को विवरण
होटल Tenerife: छुट्टी-कथा
सुनको वृष पार्क Resort (स्पेन / कोस्टा डेल Maresme): फोटो र समीक्षा
होटल AddPlus होटल र स्पा3* (फुकेत, थाईल्याण्ड): विवरण र फोटो
तपाईंले वजन कम गर्दा के तपाईं खाना खाउन सक्नुहुन्न?
Inna Volovicheva र वजन उनको हानि को गोप्य
सबै भन्दा राम्रो उपहार - आमा
Nokia 6300. nokia: विशेषताहरु, फोटो, निर्देशन, समीक्षा
एक बहुभाषी मा पाक कला स्पेगेटी
विश्वासघात - मेरो कथा
Eldor Urazbaev: जीवनी र चलचित्र
एक मदतको लागि हतार गर्न - जो डाक्टर कम फिर्ता दुखाइ व्यवहार?